Kooxda Horseed oo kala dhantaashay Naadiga Raadsan kulankii galabta ka dhacay garoonka Ex-Koonis - Hargeele - Wararka Somali State
Kooxda Horseed oo kala dhantaashay Naadiga Raadsan kulankii galabta ka dhacay garoonka Ex-Koonis
(Muqdisho) 13 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Horseed FC ayaa galabta guul muhiim ah ka gaartay naadiga Raadsan kaddib markii 4-2 ay ugu adkaatay kooxdan, ciyaar qeyb ka ahayd horyaalka Somali Premier League.
Kulankan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan ay u soo daawasho tageen taageerayaal tiro badan kuwaasoo kala taageersanaa labada kooxood ee wada ciyaarayey.
Kooxda Horseed waxay goolasha ka kala heshay xiddigaha kala ah Xasaasi, Mahad Shiino, Brown iyo France, afartaas ciyaartooy ayaa soo wada taabtay shabaqada kooxda Raadsan.
Naadiga Raadsan labada gool waxaa u dhaliyay xiddiga reer Uganda ee Maxamed Okilo.
Si kastaba ha ahaatee, kulanka ayaa ku soo dhammaaday 4-2 oo ay guusha ku raacday kooxda Horseed FC.
Kumuu ahaa shaqsigii wajiga qarsaday ee sii galayey xerada tababarka Kooxda Man United, miyuu ahaa saxiix cusub?
Ciidanka Xoogga dalka oo Maleeshiyada Al-Shabaab ka saaray deegaanka Tooratoorow ee gobolka Sh/hoose+Sawirro